Lo Ta Ya - MPT Myanmar
Viu မှာ ရှိတဲ့ ရုပ်ရှင်နဲ့ ရုပ်သံဇာတ်လမ်းအားလုံးကို MPT နဲ့အတူ အခမဲ့ ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။
MPT မိုဘိုင်းဒေတာ အသုံးပြုသူတိုင်း ရုပ်ရှင်နဲ့ ရုပ်သံဇာတ်လမ်းထောင်ပေါင်းများစွာကို Viu မှာ စာရင်းသွင်းခပေးဆာင်ရန်မလိုဘဲ အခမဲ့ ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။Running Man, At Eighteen ကဲ့သို့သော ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲများကို နှစ်သက်ပါသလား။ နောက်ဆုံးထွက်ရှိထားတဲ့အပိုင်းကို မြန်မာ စာတန်းထိုးဖြင့် ကြည့်ရှုလိုက်ပါ။ သို့မဟုတ် မြန်မာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေဖြစ်တဲ့ ငယ်ကျွန်၊ လူကြိုက်များတဲ့ မင်္ဂလာရှိတဲ့အရပ် စီးရီး၊ အိန္ဒိယ အက်ရှင်ဇာတ်ကား Super Hit နဲ့ရုပ်သံစီးရီး များကိုလည်း ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။ နိုင်ငံ ခြောက်နိုင်ငံရဲ့ အရမ်းကောင်းတဲ့ ဇာတ်ကားတွေနဲ့ ရုပ်သံစီးရီးတွေကို လူတိုင်းကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။
MPTမှ ဝန်ဆောင်မှုအတွက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းချက်များ
VIU Premium Offer
၁. Viu ဆိုတာဘာလဲ။
Viu ဆိုတာ ရုပ်ရှင်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းမှာ ထိပ်တန်းရောက်နေတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ အာရှနိုင်ငံ ၆နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ ကိုရီးယား၊ အိန္ဒိယ၊တရုတ်၊ ထိုင်း၊ ဂျပန်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းက အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ ထောင်နဲ့ချီ ရုပ်ရှင်တွေ၊ တီဗီရှိုးအစီအစဉ်တွေကို မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ အပြည့်အဝနဲ့ ကြည့်ရှုနိုင်မယ့် ဝန်ဆောင်မှု တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
၂. Viu အက်ပလီကေးရှင်ကို ဘယ်နေရာကနေ ဒေါင်းလုတ်လုပ်လို့ရမလဲ။
Viu အက်ပလီကေးရှင်းကို Google Play Store ဒါမှမဟုတ် https://www.viu.com/ott/web/mm/viu.apk ကနေ ဒေါင်းလုတ် ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
၃. Viu မှာ ဗီဒီယိုတွေကြည့်ဖို့ ပိုက်ဆံပေးရမှာလား။
MPT ရဲ့မိုဘိုင်း ဒေတာ အသုံးပြုနေသ၍ အားလုံးကို စာရင်းသွင်းခ ပေးဆောင်ရန်မလိုဘဲ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ဒေတာ အသုံးပြုခကျသင့်မည်ဖြစ်ပြီး ဝယ်ယူထားသော ပက်ကေ့ချ်အလိုက် (သို့) သုံးသလောက်ပေး အင်တာနက်မှ ဖြတ်တောက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
၄. ဗီဒီယိုတွေကို အရေအတွက် အကန့်အသတ်နဲ့ ကြည့်ရှုရမှာလား။
ဗီဒီယိုတွေကို ဘယ်နှစ်ကားပဲကြည့်ရမယ်လို့ သတ်မှတ်ထားတာမျိုးမရှိပါဘူး။ MPT ရဲ MPT ရဲ့ မိုဘိုင်း ဒေတာ အသုံးပြုနေသ၍ တိုက်ရိုက် (သို့) app ထဲသို့ဒေါင်းပြီး ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
၅. Viu က ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ဖို့ အကောင့်ဖွင့်ဖို့လိုအပ်လား။
MPT ကွန်ရက်ကနေ Viu app ထဲကို ဝင်ပြီး ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ဗီဒီယိုတွေကို ကြည့်နိုင်ပါပြီ။ အဲ့ဒါကြောင့် အကောင့် ဖွင့်ဖို့လိုမှာမဟုတ်ပါဘူး။
၆. ဝိုင်ဖိုင် နဲ့ရော အခမဲ့ ကြည့်ရှုနိုင်ပါသလား။
မရနိုင်ပါ။ MPT ရဲ့မိုဘိုင်း ဒေတာ နှင့် သာ အခမဲ့ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
၇. ဒေါင်းလုတ် လုပ်ထားတဲ့ video တွေကို ဘယ်နှစ်ရက် သိမ်းနိုင်ပါသလဲ?
ဒေါင်းလုတ် video တွေကို ၇ ရက် သိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။ ၇ ရက်ကျော်သွားသောအခါ သက်တမ်းတိုးရန် နှိပ်ပြီး သက်တမ်းတိုးနိုင်ပါတယ်။
၈. Viu app ကို ဖွင့်သော်လည်း ဇာတ်ကား တွေကို ကြည့်လို့မရဘူး။ ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ။
MPT ရဲ့မိုဘိုင်းဒေတာကို ဖွင့်ထားလား သေချာ စစ်ဆေးပေးပါ။ ဖွင့်ထားသော်လည်း ကြည်လို့မရပါက app ကို ပိတ်လိုက်ပါ။ android settings ထဲရှိ cache များကို ရှင်းလင်းပြီး restart ပြုလုပ်ပါ။
၉. Viu အထူးကြည့်ရှုခွင့်ကို ဝယ်ထားပြီးသာ ဆိုရင် ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ။
ဝယ်ထားသော ကြည့်ရှုခွင့် ကုန်သည်အထိ ဆက်လက် အသုံးပြုပါ။ ကုန်ဆုံးပြီးနောက် ထပ်မံ ဝယ်ယူရန် မလိုတော့ဘဲ MPT မိုဘိုင်း ဒေတာကို သုံး၍ ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။
10. Viu app နှင့် ပတ်သက်ပြီး အခက်အခဲ ရှိပါက ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ။
Data qနဲ့ပတ်သက်၍ အဆင်မပြေပါက MPT ရဲ့ ဖုန်းနံပါတ် ၁၀၆ ကိုခေါ်ဆိုမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
Viu App နဲ့ပတ်သက်၍ အဆင်မပြေပါက Viu ကိုအောက်ပါအတိုင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
help.viu@vuclip.com ကို အချိန်မရွေး ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
Viu Myanmar Facebook Page ကို အချိန်မရွေး ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
ဖုန်းနံပါတ် 09969900000 ကို တနင်္လာမှ သောကြာနေ့အထိ နံနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၆ နာရီ (ရုံးချိန်အတွင်း) ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။